Badhasaabka Togdheer Oo Baaq U diray ciyaartoyga xulka Gobolka | Salaan Media
Badhasaabka Togdheer Oo Baaq U diray ciyaartoyga xulka Gobolka
Burco (SM)-Badhasaabka Gobolka Togdheer Axmed Cumar Xaji Cabdillaahi (Xamarji) ayaa fariin digniin ah u diray Gobolada Tartanka Ciyaaraha Somaliland ka qayb galaaya. Isagoo ku wargaliyay in Koobka ay la caraabi doonaan Ciyaartoyda ka socota Gobolka uu Madaxda ka yahay.
Sidaana wuxuu ku sheegay Mr. Xamarji, Waraysi uu goor dhaweyd siiyay Shabakadda Wararka ee Somalilandtoday.com. Isagoo ugu horeyn Ka Jawaabaya su’aal ahayd inuu faah faahin ka bixyo, shir ballaadhan oo ay maanta la yeesheen dhammaan ciyaartoyda Togdheer, isaga iyo masuuliyiin uu kamid ahaa Wuxuuna ku jawaabay.
“Waxaan jecelahay inaan bulshada Togdheer u cadeeyo inay walaalo yihiin ciyaartoyda Gobolka Togdheer, xumaantana in la buun buuniyo hadaanay jirin maha. Wax halkan ka jiraa ma jiraan, Ciyaartoyda Togdheer waxay wataan Magaaca GOR-GORADA GOBOLKA TOGDHEER, waxaan fariin ahaan ugu dirayaa Gobolada tartankaas ka qayb gali doona, in Togdheer qaadi doonto Koobka haddii alle idmo, ballan qaadkayga hore ayaa loo arkay, wakhtigii aan ahaa Guddoomiyaha Maroodijeex, kana insha allah waa la arkayaa. Burco iyo Togdheer waa mid hal magac leh, walaalo ah waxaase jira dacaayada Burco runbaan idin sheegayaaye aadba loo jecel yahay, dadkuna way ka helaan in layara wad-wado. Lakiin Burco qofkii dhex jooga ayaa og walaltinimadooda iyo midnimada ay mideysanyihiin”.
Guddoomiye Xamarji oo sii wata hadalkiisi ayaa mar kale yidhi. “Waxaan u mahad naqayaa dhammaan masuuliyiinta Gobolka ku sugan maamulka degmada, runtii meesha wax weyni ma oolin ee farsamada ayuunbaan siday ahayd loo galin markii hore, Wasiirkuna arrintaas wuu galay”
Badhasaabka Togdheer oo ka jawaabaya su’aal kale oo u dhignayd, in maqalkii khilaafka ciyaaraha Burco ku keenay ciyaartoyda Gobolka niyad jab ay ka qadeen shacabka Burco wuxuu ku jawaabay. “May taas lama odhan karo, Ciyaartoydu waa dhalinyaradii Burco oo walaalo ah, runtii wax u sheeg iyo u hoggaamin si wanaagsan ayay u baahan yihiin, dhalinyaranimada qudheeda u baahan wax u sheeg badan, wax weyn oo la dhibsadaana smeesha ma oolin oo maanta Ciyaartoydu way isku ooyeen. Sidaan marka hore ku sheegayna waa layska jecelyahay dacaayada Burco, balse midnimda Gobolkayaga waxaa laga arki doona Ciyaaraha.
Waxaana sidaan sheegay arrintan nagala qayb qaatay oo door weyn ku lahaa soo afjaridooda Waftigii nooga yimi Magaaladda Hargaysa ee Masuuliyiinta Qaran ahaa, caawna casho sharaf ballaadhan oo ballan ah ayay wada qadanayaan dhalinyaradda Ciyaartoyda iyo masuuliyiintu, taas oo loogu tallo galay ciyaartoyga.”